Kukhalwa 'ngamandla' kufa osomatekisi - Ilanga News
Home Izindaba Kukhalwa ‘ngamandla’ kufa osomatekisi
Kukhalwa ‘ngamandla’ kufa osomatekisi
Babona ukuthanjiswa kwemigomo esigabeni sesithathu sokuvalwa kwezwe kunomkhulu umthelela
ISALE imbobombobo kanjena itekisi kubulawa abanikazi bamatekisi kuleli sonto.
IKHALA ngemali yebhakede eqoqwa kososeshini iSouth African Taxi Council (Santaco) KwaZulu-Natal ngokunyuka ngesivinini kwesibalo sokubulawa kosomatekisi selokhu kuxegiswe imigomo yokuvalwa kwezwe ngenxa yeCovid-19.
Le nhlangano ikusho lokhu ikhuluma neLANGA izolo ngoLwesithathu emuva kwezigameko ezahlukene ngeledlule zokubulawa kwabanikazi bamatekisi kulesi sifundazwe.
Phakathi kosomatekisi asebebulewe kusukela ngeledlule, kukhona uMnu Jeremiah Zulu (61) waseMpangeni onamatekisi ahambela eRichards Bay, odutshulwe ngentululwane yezinhlamvu ngoMgqibelo ehamba nomndeni wakhe, kwagcina kushone nezingane zakhe ezimbili kulesi sigameko.
UMnu Zulu ubulawa nje, ubesethathe umhlalaphansi ekubeni ngusihlalo kasoseshini waseRichards bay.
NgoMsombuluko kudutshulwe kwabulawa uMnu Thandokwakhe Cebekhulu (34), eWaterloo, eVerulam, obenamatekisi abehambela kule ndawo.
Ngawo uMsombuluko, kubulawe uMnu Sbongiseni Madlala (54) eMthonjaneni, eNdwedwe, odutshulwe ngentululwane yezinhlamvu esemotweni yakhe egade umsebenzi, ngoLwesibili kubulawe uMnu Sihle Mnguni eDraycott, eMtshezi naye othelwe othulini ngenhlamvu esemotweni.
ILANGA libe nengxoxo ekhethekile noSihlalo weSantaco KwaZulu-Natal, uMnu Boy Zondi, ngale nzukazikeyi ababhekene nayo, uveze ukuthi bekusashaya umoya njengoba izwe belivaliwe.
“Ngaze ngathumela umyalezo kwabanye ozakwethu ngincoma ukuthi saphumula wukuzwa izindaba zokubulawa kosomatekisi. Kube wukuthanjiswa kwemigomo emayelana nokuvalwa kwezwe, kwaqala phansi ukubulawa kwabo,” kusho uMnu Zondi.
Uthi into eyinkinga kakhulu, edala ukuba osomatekisi babulawe ngale ndlela, yile mali encane eqoqwa ngososeshini, okuthiwa yimali yebhakede.
“Iningi lozakwethu libulalelana le mali namandla okuphatha. Sike saze saba nombono sifisa ukuthi uhulumeni ake abuyise lolu phiko lwamaphoyisa lwakwaKito.
“Isimo sike sathi ukwehla ngesikhathi kusenalolu phiko lwamaphoyisa, belukwazi ukunqanda isimo.
“Siyafisa ukuthi uhulumeni ake uqinise umthetho ngendaba yokubulawa kwabanikazi bamatekisi, baboshwe abantu abenza lokhu.
“Siyimboni kasihambisani nendaba yokuba kubulawe osomatekisi ngale ndlela, kuyimanje siphezu kwazo izindlela esizosebenza ngaphansi kwazo ukuzama ukunqanda le nkinga.
Okhulumela amaphoyisa kwaZulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, uziqinisekisile lezi zigameko zokubulawa kwalabo somatekisi, wathi akhona amacala okubulala avuliwe, amaphoyisa asaphenya, bekungakaboshwa muntu.
Previous articleUsizi konezinyanga eziwu-5 engaholi
Next articleUMengameli uphinde waxegisa eye-Corona